Vaovao - TOP 5 UnionLaser Solution fibre laser ho an'ny fanapahana vy sy ny maro hafa
UnionLaser dia manana traikefa an-taonany maro amin'ny famolavolana vahaolana laser.Izahay dia manolotra ao amin'ny lisitra eto ambany TOP 5 UnionLaser Solution fibre cutter soso-kevitra amin'ny fanapahana vy sy ny maro hafa.
Modely UL1313F andian-dahatsoratra - laser amin'ny trano feno miaraka amin'ny tampon-trano azo averina ary varavarana miolikolika miakatra.Ny safidy matetika nofidin'ny mpanjifa amin'ny fibre optic cutter ho an'ny takelaka hatramin'ny 1300x1300mm.Natokana ho an'ny famokarana kely sy antonony.
Modely UL-3015F andian-dahatsoratra malaza tamin'ny laser cutter mety tsara ho an'ny kely sy antonony-volo famokarana, tsy misy afa-tsy amin'ny trano misokatra (tsy voatery miasa saha: 2500x1300mm sy 4000x1500mm， 6000*2000mm).Ny fanorenana ampiasaina dia mampihena be ny hovitrovitra.Ny marimaritra iraisana tonga lafatra eo amin'ny mety sy ny vidiny.
Modely UL-3015 G andian-dahatsoratra - Mpipaka fibre matihanina avo lenta amin'ny trano feno.Ny tombony dia latabatra asa roa azo ovaina miasa mifandimby, ka mampiasa ny hafainganam-pandehan'ny famokarana feno ny fitaovana.Ny fonon'ny andiany G dia manana rafitra fandoroana 4-efi-trano, varavarana mihodinkodina tanteraka sy varavarana eo anoloana, ary fakan-tsary apetraka miaraka amin'ny monitor LCD ahafahanao manara-maso ny fizotran'ny machining.Azo ampiasaina amin'ny fanapahana mihoatra ny 30mm ny hateviny.
Modely UL-600H andiany - Izy no mpanapaka laser mazava indrindra amin'ny tolotray.Recommended, ohatra, ho an'ny firavaka sy ny fanodinana singa tena kely amin'ny marina hatramin'ny 0.01mm.Amin'ity andiany ity dia nampiasa varavarankely fijerena 3 izahay ary varavarana misokatra aoriana, rafitra manokana misy takelaka fiasana marbra ary clamps linear azo amboarina koa, noho izany na dia fitaovana manify aza dia hiraikitra mafy.
Modely UL-6020T andiany - Matihanina amin'ny fanapahana sodina.Afaka manapaka izay endrika boribory, efamira, mahitsizoro fantsona.
Ireo fitaovana ireo dia azo ampitomboina amin'ny fametahana fantsona sy profil.
Teny vitsivitsy alohan'ny hividianana fitaovana UL avy amin'ny sokajy fibre:
Mifidy ny fanamafisam-peo tsirairay izahay, manomboka amin'ny filan'ny famokarana sy ny teti-bolan'ny mpanjifa.
Manolotra modely fototra misy hery avy amin'ny 500W ka hatramin'ny 20000w ary koa maodely matihanina faran'izay haingana natokana ho an'ny famokarana avo lenta.
Ny laser fibre UnionLaser dia antoka amin'ny fitambaran'ireo singa marika, fiasa ary famolavolana.
Amin'ny maha-ara-dalàna azy, ny mpanjifantsika dia mahazo maimaim-poana amin'ny laser fibre tsirairay: fametrahana sy fanofanana mpandraharaha, rindrambaiko CYPCUT amin'ny fiteny samihafa, fisafoana serivisy maimaim-poana, fiantohana ny mpanamboatra (hatramin'ny 3 taona), fanohanana serivisy lavitra maimaim-poana, politika UnionLaser Care maimaim-poana.
Fotoana fandefasana: Nov-12-2021